Gen. Qaafoow Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Halka uu Marayo Howlgalka Ay Dalka Kaga Xoreynayaan Argagixisada |
Gen. Qaafoow Oo Faah Faahin Ka Bixiyay Halka uu Marayo Howlgalka Ay Dalka Kaga Xoreynayaan Argagixisada
Taliska ciidanka xoogga dalka qeybta 12 Apriil ayaa faah faahin ka bixiyay ammaanka gobaha ay gacanta ku hayaan, isagoo sheegay in heer geba gebo ah uu ku dhowyahay howlgalka kooxda Shabaab looga sifaynayo gobollada dalka.
Gen. Maxamed Maxamuud Xasan Qaafoow taliyaha guutada 12-ka April ee ciidanka XDS oo ka howlgala gobollada Shabeellooyinka iyo Banaadir ayaa faah faahin ka bixiyay ammaanka goobaha ay gacanta ku hayaan iyo halka uu marayo howlgalka ka dhanka ah argagixisada Shabaab.
“Waxaa ka socda dalka olole lagu ciribtirayo isbaarooyinka, la dagaalanka argagixisada iyo cid kastoo wadda amnidarro, taasoo muddo dheer la soo waday hadana mareysa meel gebagebo ah” ayuu yiri Gen Qaafoow.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray in lagu guuleystay qaadista jidgooyooyinkii yaalay afarta waddo ee soo gasha magaalada Muqdisho, isagoo tibaaxay in loo fasaxay wasaarada Maaliyadda si ay halkaasi uga qaadato cashuurta sharciga ah ee dowladda.
Gen Qaafoow ayaa soo hadalqaaday halka uu marayo howlgalka ay ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM dalka uga xoreeynayaan argagixisada Shabaab.
“Waxaa Jira howlgal ka dhaxeeya ciidamada qalabka sida iyo AMISOM kaasoo uu noo furay madaxweynaha J.F.S. mudane Xasan Sheekh, kaasoo wax badan ka bedelay wadashaqeynta iyo xiriirka ka dhaxeeya noocyada ciidamada qalabka sida iyo walaalohooda AMISOM, howlgalkuna waa joogto habeen iyo maalin, ujeedaduna waaa in dalka oo dhan an gacanta ku dhigno mana muuqato awood badan oo na celineysa” Sidaasi waxaa yiri Gen Qaafoow.